Dị ink nke igbu egbugbu, olee nke a ga-eji mee ihe na nke ọ bụla? | Igbu egbugbu
Inkdị ink tattoo
Susana godoy | | Ndị na-ese egbugbu, Ogbugbu
Mgbe anyị nwere mmasị n'okwu, anyị nwere ike chọọ ma gwa onwe anyị ihe ụfọdụ mgbe ụfọdụ agaghị agabiga n'uche anyị. Taa ịmata ihe emewo ka m chee ma m nwere ihe karịrị otu ink ụdị ịrụ egbugbu.
Na mgbe enyocha a bit na-awagharị site na iche iche oghere na net, azịza ya bụ ee, anyị na-ahụ dị iche iche ụdị ink iji rụọ ọrụ aka na akpụkpọ anyị, ihe m na-amaghị. You chọrọ ịmatakwu banyere ha niile?
1 Ofdị ink tattoo: ink akwukwo nri
2 Sịntetik ink ma ọ bụ na acrylic pigments
3 Inye egbugbu egbugbu a kwadoro na Spain
4 Ultraviolet Tattoo Ink
5 Fluorescent Tattoo Ink
6 Inkdị ink ọcha
7 Mkpụrụ egbugbu na-enweghị ọla
Ofdị ink tattoo: ink akwukwo nri
A na-enwe mkparịta ụka mgbe niile, ọ ga-adịkwa, yana echiche, n’etiti otu ụdị ink na nke ọzọ. N'otu aka, anyị nwere inks inine, nke bụ ndị na-eji ụdị ihe nri akwụkwọ nri. O doro anya na a mụrụ ha mgbe ụfọdụ ndị na-egbu egbu achọghị ịrụ ọrụ na inks nwere ike ịnwe ogige anụmanụ. N'ihi ya, ọ bụ ha onwe ha bụ ndị were nzọụkwụ nke na-eme mix. N'ezie, usoro a ga-achịkwa usoro a iji tinye ya n'ọrụ. Nke nta nke nta e mezuru ya na ink akwukwo nri pụtara inye ndụ nnukwu atụmatụ.
N'etiti uru ya, anyị nwere ike ịsị na ịbụ osisi n'etiti ogige ya, ịbụ organic, a gaghị enwe nsogbu dị otú ahụ ugboro ugboro nke mmeghachi omume nfụkasị. Ya mere, ahụ ga-anabata ha n'ụzọ dị mfe karị, na-asị goodbye na allergies, itching, wdg. Mana ọ bụ eziokwu na na nke a, agba nwere ike ọgaghị adị ka ụdị inks ndị ọzọ. Na mgbakwunye, nke a pụtara na ink nwere ike ịda ntakịrị ngwa ngwa karịa ụdị ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ ụdị n'ahịa ndị na-arụ ọrụ naanị 100% vegan inks.
Sịntetik ink ma ọ bụ na acrylic pigments
Ọla bụ isi ogige nke ụdị inks na nke a bụ nnukwu ihe dị iche na njikọ ndị gara aga. N'ime ha, ndu nwere ike ịpụta mgbe anyị na-ekwu maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ma maka onye na-acha uhie uhie na nke nwere ike ibute ụdị nsogbu dị iche iche, ọ ga-enwe mercury. Zinc bu ihe eji eme ihe maka odo odo na chromium maka akwukwo ndu na acha anụnụ anụnụ. Ihe kachasị maka ink ojii bụ nickel.
Nke a bụ isi nke inks, mana mgbe e mesịrị, ha nwere akụrụngwa ọzọ. Ihe na-eme ka ọ dị mkpụmkpụ, ụdị inks na-egbu egbu bụ sịntetik ma ọ bụ acrylic, ha nwere ike inyekwu mmeghachi omume n'ụdị nke nfụkasị ahụ. Anyị ekwuola ya ma na-ekwusi ike ọzọ na otu n’ime ihe ndị kacha akpata ya na-acha ọbara ọbara, ebe ọ nwere ọtụtụ mineral. N'ezie, n'etiti uru ya, ụdị ink a nwere ọtụtụ ihe na-egbuke egbuke na nsonaazụ nke agba ya dị oke ike. Dị ka akwukwo nri, ha nwere ike ichota, ma jiri nwayọ nwayọ ma dabere n'ụdị akpụkpọ ahụ, nke dịkwa mkpa.
Inye egbugbu egbugbu a kwadoro na Spain
Arụrịta ụka ahụ abụrụla maka afọ. Ọ bụ n’ihi na ọtụtụ ndị ọkachamara mere mkpesa na ink ahụ e ji mee ihe na Spen nakwa na ha dị homologated inksHa abughi nke di elu dika ndi ozo Europe. Naanị ụdị ink ole na ole ka enwere ike ịnweta. Ebe obu na ha bu ndi nwere ihe ndi mejuputara iwu. Mana ikekwe, ha kwụ chịm dịka ndị ọzọ n'ahịa. Nke a mere ka ọtụtụ ndị na-ese egbugbu na-etinye egbugbu na inks nke Europe mana nke ahụ adabaghị na iwu na obodo anyị.
Nke a na-eme ka o doo anya na Spain nwere iwu na-egbochi oke ya na ụdị ngwaahịa a, ihe niile kpatara mmeghachi omume ha nwere ike ibute mmadụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-abụ mmebi nke ink n'onwe ya, kamakwa nke akpụkpọ ahụ na ọnọdụ ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-eme mgbe niile jụọ ndị na-ese egbugbu na ụdị na inks ọ na-eji, nke mere na ị nwere ike ịmata ihe mejupụtara ma zere ụdị nsogbu niile.
Ultraviolet Tattoo Ink
Ọ bụ ụdị ọzọ nke ụdị ink maka egbu egbu mana n'ezie, ekwesịrị ikwu na ha bụ inks na-eme ihe ike karịa ndị anyị maara. Ya mere, ọ ka mma ịhapụ ha na ndabere. N'agbanyeghị nke a na nke ahụ naanị ga-eme ka atụmatụ ahụ pụta ìhè n'okpuru ọkụ UVỌ bụ eziokwu na ha enweela ihe ịga nke ọma dị ukwuu ma na-aga n'ihu. Akụkụ nke ọzọ bụ na ha nwere ike ịkpata mmeghachi omume nfụkasị ahụ ma bụrụ ndị dị oke njọ ma ọ bụ buru oke ibu.
Ese ụdị neon ụdị, nke enwere ike ịhụ naanị dị ka ihe na-egbu maramara, adighi akwado ya. N'ezie, a naghị ewere ya dị ka ink nke akwadoro. Enwere ike ịhụ ha n'ọchịchịrị na mgbakwunye, ink nwere phosphorous. Ọ bụ nke a na-enweta na enwere ike ịpụta ya naanị na oghere nwere obere ọkụ.
Inkdị ink ọcha
Ha enweghị ike ịnọ mgbe anyị na-ekwu maka ụdị ink na egbu egbu. Maka na a na-ahụkwa ha oge niile. Nke mbụ, anyị ga-ekwu na ụdị echiche ndị a ga-abụrịrị ndị ọkachamara ga-eme, ọ bụghị naanị dị ka ndị na-egbu egbugbu n'ozuzu, mana ndị maara nke ọma ụdị ink nke ha ji arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, egbugbu na ink ọcha na-eme ka a ghara ịhụ ya, ịbụ ihe ngosi na akpụkpọ ọchịchịrị ma ichapu, na-eme udiri udiri onodu aru ozo.
Mkpụrụ egbugbu na-enweghị ọla
Mgbe anyị kwuru banyere ink egbu egbu na-enweghị ọla, anyị na-ekwu maka akwụkwọ nri ọzọ. Mana obu eziokwu na oge ufodu, ha matara onwe ha karia otua, yabụ anyi kwesiri ikwusi ya. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ụcha ndị na-enye agba ahụ agaghị enwe ogige ndị na-emerụ ahụ.
Ihe niile nwere uru na ọghọm, mana ihe pụtara ìhè bụ na anyị nwere ike ikpebi kedu iji jiri na ọmụmụ nke igbu egbugbu nke anyị na-aga. Otu ọchịchọ ịmata ihe iji banye na akaụntụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu nfụkasị ahụ mfe. Anyị enweghị ike ichefu na anyị nọ n’ihu ihe na-abanye n’okpuru akpụkpọ anyị, yabụ tupu anyị akụwa ọnụ anyị, anyị ga-akpachara anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Inkdị ink tattoo
David rojas dijo
ebee ka m nwere ike ịzụta timta inine
Zaghachi david rojas
corduroy ebe m nwere ike ịzụta ink akwukwo nri maka egbugbu
Ebee ka m ga azuta pigmenti ?????? Daalụ
Ndewo onye ọ bụla !! Ọ ga-amasị m ịma ma ink ojii ahụ. o nwere sulfate ma obu sulfa nke na eweputa ya nihi na aru adighi m ya aru
Achọrọ m ịma ụdị ink m nwere ike iji maka ọ bụrụ na m ga-enye onyinye ọbara ???
Tattoos n’olu niile, ebe dị mgbagwoju anya ma na-egbu mgbu
Dice egbugbu ka chioma diri gi